Ilindele ngamaholide abasebenzi izinkampani eziningi ahlele nezenzakalo corporate. Ukuya sehlo, amantombazane kwasekuqaleni, cabanga zikhathi: sizogqokani a yenkampani, yini kwekhanda ukukwenza nalokho izimonyo ukuze zikhange abantu bakulezi izilaleli.
Okokuqala, isembatho sakho kumele kuhambisane nendlela yokugqoka inkampani. Ngaphezu kwalokho, kutuswa ukuba akhethe izingubo ukuthi kuyoba kancane nesizotha kunalokho Abaphathi yakho. Kungenjalo, wena engozini okubangela ukubukeka siyathukuthela ukuphathwa. Umthetho wesithathu, okuyilona elidingekayo ukuze unamathele - dress yakho akufanele kube onesizotha futhi, kodwa kumele ifane isikhathi futhi elula nenhle. Ukuze izenzakalo ezinjalo izingubo inhlamba futhi ukwambulwa kakhulu kangcono ubeke eceleni. Yebo, futhi suit esisemthethweni ungenziwa kuphela okwesabisa osebenza nabo.
Impendulo enhle kakhulu lo mbuzo: "? Yini Gqoka a yenkampani" Ingabe i-miniature dress black umbala. Uma le phathi kuyokwenzeka ngaphakathi ehhovisi, esihambisana nezicathulo ezimnyama nge izithende ongaphakeme, uyobheka nje ephelele. Uma uhlela ukuba okukhiphayo yokudlela noma into efana naleyo, ungakhetha izicathulo ne izithende, ngaphandle-ke, uzobe ukhululekile kulezi izicathulo lonke kusihlwa. esikhwameni Refined brand odumile futhi intambo ye amapharele uzogcwalisa isithombe sakho ebukekayo.
Isitayela ingubo Kufanele kukhethwe, kucatshangelwa izici zomzimba wakho. Uma ngokwemvelo ungumuntu usinamathelise intombazane, eside ingubo Friend ngenhla nje kwamadolo nge neckline hhayi obukhulu, uyobheka ephelele. Figure amaphutha ezingelapheka okuxekethile esinamathelayo ngubo ngaphezulu.
Yikuphi ingubo ukugqoka ihhovisi yenkampani, uma ungeyena uyakuthanda amathoni udangele? Kungenjalo, ungakwazi sithathe izingubo, ezifanayo umbala kwansuku yakho. iyashintsha iyaphupha ibe nombala lace ingubo uyobheka ekhululekile kakhulu futhi zemvelo.
Uma namanje usohlelweni kuhlelwe uhambo yokudlela ke futhi, ungakhohlwa mayelana nokuvumelana isitayela neziyinkimbinkimbi. Kulokhu, dress yakho akufanele zifane izingubo kwansuku zonke. Futhi gwema izingubo Friend too, ngoba kuzokwenza ngokuphazamisa wena ngomkhosi. Indwangu Nokunwebeka esetshenziselwa ukuthunga izingubo, kunalokho ukukusiza kule. Uma igumbi cool ke uthathe Bolero, umbala ofanayo.
Uma inhlangano sihlelelwe ukuqhuba kuyi-nightclub, bese uyakhetha ukuthi yini ukugqoka a yenkampani, ngeke kube nzima. Ukuze Kulokhu ezifanelekayo jeans imfashini blouses noma amahembe nge sequins. Uma it is hhayi Kunconywa ukugqoka ngokobudala yakho isigaba jeans, bangakwazi esikhundleni ibhulukwe stylish uyobheka nje njengoba omuhle. Kulokhu, ungakhetha ihembe futhi kancane nesizotha more. Inhloso esemqoka - ukugwema vulgarity e dress.
Uma lo mkhosi sihlelelwe ezindlini zikanokusho, ngokuvamile akhipha izimemo wathi egqoka ikhodi. Ngakho yini okufanele uyigqoke a ezinkampani Kulokhu, ukucabanga ukuthi sibakhulu kakhulu ngomusa. Ngokuvamile izenzo ezinjalo kuthathwe ukugqoka phansi sobude izingubo. Hairstyle nezinsiza, futhi, kumele akhethwe kahle.
Ukukhetha sizogqokani ku yenkampani KaNcibijane, kufanele balandele imithetho efanayo kwezinye. izingubo kufanele ancike nendawo party futhi isimo inkampani lapho abasebenza. Uma emkhathini jikelele iqembu kumele amahlaya kanye enza imigilingwane enjengeye ke ngubo, ungakwazi ukuhlobisa noma yini ingqikithi Christmas. Into esemqoka akukona ukuthi overdo it. Ngaphansi nenhle nokugqoka esiqinile cut akunakwenzeka ukuba uvumelane cap Santa Claus, ngakho-ke ngeke bheka engenangqondo aluhlaza cwe. Kunoma ikuphi, udinga ukugxila hhayi kuphela yakho esikuthandayo, kodwa futhi ku i dress code olungekho emthethweni lenkampani.
Ukwatapheya: Tasty isaladi iresiphi
Kanjani amandla Aero